Heshiis Is Afgarad oo Dhexmaray Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan | SAHAN ONLINE
Heshiis Is Afgarad oo Dhexmaray Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan
Khartuum-Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Booqasho rasmi ku jooga Dalka Suudaan ayaa kulan uu Magaaladda Khartoum ee Xarunta dalkaasi ay kula yeeshay Madaxweynaha Wadanka Sudan Cumar Xasan Al-bashiir ay kaga hadleen arrimo dhowr oo labada dal ku saabsan, iyagoo isla gartay Qodob dhowr.
Madaxweynaha JF Soomaaliya ayaa dhiggiisa Dalka Sudan uga mahad celiyey taageerida suudaan ay la garab istaagtay Soomaaliya inta ay burbursaneed ilaa haatan, gaar ahaan dhanka Waxbarashadda.
Heshiisyada ay isla garteen Labada Dal ayaa waxaa kamid ah :-
waxay isla garteen labada Madaxweyne muhiimadda ay leedahay in la helo Iskaashi dhaqaale oo dhex mara dowladdaha geeska Africa, Mustaqbalka dhowna lagu dhawaaqo midow Ganacsi oo ay ku midaysanyihiin dowladdaha geeska africa.
Waxay isla garteen labada dhinac in la iska kaashado dhinacyadda Beeraha, Waxbarashada, Ganacsiga xoolaha, Baasaboorka, Safaradda iyo Duulimaadka shacabka.
In la sameeyo Guddi Siyaasadeed ee Wasaaraddaha arrimaha dibadda labada dhinac si loo dardar galiyo xariirka dhabaha cusub loo xaaray ee Somalia iyo Sudan ka dhaxeeya.
Hishiisyadan ay wada gaareen Madaxda Wadamada Soomaaliya iyo Suudaan ayaa u daneeynayo labada shacab ee Walaalaha ah, waxaana ay xoojinayaan Saaxiibtinimada qotada dheer ee dhaxeysa Somalia iyo Sudan.